Isitudiyo esitsha esineebhedi ezimbini okanye ezimbini - I-Airbnb
Isitudiyo esitsha esineebhedi ezimbini okanye ezimbini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguToni
Le yindawo entle kumbindi we-Frankton kwimizuzu eyi-25 xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya kwaye kanye phakathi kweevenkile zokutyela kunye neevenkile. Ukujongwa kweentaba kuphakathi kweevenkile zokutyela neevenkile zokutyela. Iphakathi kweCoronet Peak kunye neRemarkables le yindawo entle yohambo lweempela-veki lokutyibiliza ekhephini eQueenstown. Ilungele abantu abathandanayo abakwiibhedi ezinkulu okanye inokwahlulwa ibe ziibhedi ezimbini. Kwiintsuku ezifudumeleyo nasebusuku, kukho ityeya encinci onokuyonwabela.
Le yiflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex esandul 'ukuvulwa (ngoAgasti 2020) I-Remarkables Housing eyakhiwe yi-Gyp Properties. Le yindawo yokuhlala yale mihla eneendawo ezifudumeleyo nezifanelekileyo kunye nezinto zale mihla. Istudiyo sinento yonke oyifunayo.
4.82 · Izimvo eziyi-106
Iflethi Ekwisitudiyo ikwiindawo zokuhlala zeRemarkables kwindawo ebizwa ngokuba yiQueenstown Central eI Frankton. Iziko labakhenkethi apho ungangena khona kwi-gondola likumgama weekhilomitha eziyi-6. Le ndawo ineevenkile ezininzi kunye neevenkile zokutyela kwaye isembindini wokuya kwiindawo zokutyibiliza kwikhephu, iindawo zokwenza iwayini kunye nesikhululo seenqwelomoya. Ukuba ufuna ukuhamba uye e-gondola kuza kufuneka ukhethe into ekufutshane nedolophu, nangona indawo yokupaka ibiza kakhulu xa kuthelekiswa nendawo yokupaka esimahla ngamanye amaxesha xa uhamba ngeenyawo kule ndawo.
Molo, Ngexesha leveki ndizinze endlini phezulu kunye nabantwana. Ndiyakuthanda ukubulisa kwaye ndiqinisekise ukuba unayo yonke into oyifunayo kwaye ndikuncede ukonwabele ukuhlala kwakho kule ndawo. Ukuba kukho nantoni na oyifunayo nceda undifowunele okanye undithumelele umyalezo nge-Airbnb.
Molo, Ngexesha leveki ndizinze endlini phezulu kunye nabantwana. Ndiyakuthanda ukubulisa kwaye ndiqinisekise ukuba unayo yonke into oyifunayo kwaye ndikuncede ukonwabele ukuhlala…